Computer & Cell Phone » အွန်လိုင်း ဂျလေဘီ – Unfriended (2014)	16
မြစပဲရိုး says: အဲဒီကားကို မကြည့်ဖူးပေမဲ့ ကြားဖူး လိုက်တယ် ဇီကလေး ရဲ့။
kai says: အရီးလတ်တော့.. ဟိုမှာဖက်ကျ.. ကျုပ်ကို.. အလွှာတွေမခွဲရပြောသွားပြီး.. ဒီကျ.. လယ်ဗယ်တွေ.. သူ့ထက်မြင့်တာတွေ.. ဘာတွေ…လာလုပ်နေတယ်….
ဇီဇီခင်ဇော် says: စိမ်းလိုက်ပါတယ် အရီးရေ။
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ့ဒီ ဇာတ်ကားကို တခြားဇာတ်ကား သွားကြည့်တုန်းက ရုပ်ရှင်ရုံမှာ နမူနာအဖြစ် အခန်းတချို့ပဲ ကြည့်ရသေးတယ်။
ဒီမှာကတော့ အခွေ အကြည်လည်း မထွက်သေးတော့… အစအဆုံး မကြည့်ရသေးဘူး။ နမူနာလေးတွေ ကြည့်ရသလောက်တော့… ရိုက်ချက်တွေ ဆန်းသစ် တီထွင်ထားတာ တွေ့တယ်… ။
ရုပ်ရှင်လောက သမိုင်းတလျှောက်လုံး ပြ လာတဲ့ ပုံစံထဲက ခွဲထွက်ပြီး ပြချက် အသစ်တစ်ခု ထွင်ပြထားတယ်ထင့်…. .ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်မယ့် ရုပ်ရှင်အဖြစ် စိတ်ထဲ တေးထားတယ်..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကင်မရာကို ပီစီရှေ့ တည်ပြီး တကားလုံး ရိုက်သွားတာအေ။
အောင် မိုးသူ says: အဲ့သည်ကား ဒီမှာရုံတင်နေတယ်။ ဒါမယ့် ကြည့်ရင် အိမ်မှာပဲ အကြည်ခွေဝယ်ပြီး အေးဆေးကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာကြောင့် မကြည့်ရသေးဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာတော့ ကောင်းမှာပဲ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: Rating တော့ သိပ်မမြင့်လှဘူးးး
မောင်ဘလိူင် says: ကျွန်တော်တော့ ဂိုဂယ် အက်တီဗတီ ကွန်ထရိုးမှာ အကုန် ပေါ့စ် လုပ်ထားတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အမ ဆက်တင်တွေတောင်ပြန်စစ်ရအူးမယ်။
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲ့ဒီ ကား ကို သရဲကား အနေနဲ့လဲ မကြိုက်ဘူး။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟုတ်လား။
naywoon ni says: အဲ့သလိုဂျီးလား ။ ကို​ကြောင်​ဂျီး ​ရေ့ သတိထားဗျို့ ခင်​ညားဂိုစတ်​ပူဒယ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ဇီဇီခင်ဇော် says: သူ့ ဆိုရင်တော့ ဝိုင်းရိုက်လောက်မယ်။
black chaw says: သူရဲကားတော့ ကြည့်လေ့ ကြည့်ထ မရှိဘူးဗျ…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဇာတ်လမ်းကို ကောင်းလှချည်ရဲ့ ပြောတာတော့ ဟုတ်ဘူးဗျ။
ဒီကား က လူကြိုက်နည်းတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.